कसरी गर्ने थोरै समयमा घरको सरसफाई ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
कसरी गर्ने थोरै समयमा घरको सरसफाई ?
सफा घर सबैलाई मनपर्छ । तर, धेरैको गुनासो हुन्छ, जति मिहिनेत गरेर, जति सफा गरे पनि घर एकछिनमै फोहर हुन्छ । थोरै समय र कम मिहिनेतबाट पनि घर सफा गर्न सकिन्छ । जान्नुहोस् ५ टिप्स ।
पहिले झाडु–पोछा लगाउने अनि पछि धुलो झार्ने बानी धेरैको हुन्छ । तपाईंहरूलाई लाग्न सक्छ थोरै काम त हो धुलो पुछ्ने । तर, यो काम कति पटक तपाईले दोहोराएर पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । किनकी पहिले अरु सफाई सकेर धुलो झार्दा त्यो धुलो फेरी सामानहरूमा टाँसिन सक्छ । त्यसैले, पहिले सामानको धुलो पुछेर मात्र अरु सफाई गर्नुपर्छ ।
सफाई गर्ने बेला धेरैले यो गल्ती गरिरहेका हुन्छन् । एउटै कपडाले टिभी सफा गरेर फेरी त्यही कपडाले टेबल तथा अन्य सामान पुछिन्छ । यसो गर्दा एउटा सामानमा लागेको धुलो बाँकी सामानमा पनि लाग्छ । त्यसैले एउटै कपडाले धेरै सामान सफा गर्न हुँदैन ।
स्टील सफा गर्ने तरिका
स्टीलको भाँडा होस् वा ग्यास चुलो सबैलाई हामी घुमाएर पुछ्छौ । यसरी घुमाएर पुस्दा दाग बस्छ । स्टीललाई राम्ररी पुछ्ने तरीका भनेको सिधा गरेर हो, घुमाएर हैन । यसरी सिधा पुछ्दा दाग बस्दैन । सानो तर जरुरी सामानहरू सफा गर्न बिर्सन हुँदैन ।
सफाई गर्दा प्रायः हामी साना सामानहरू सफा गर्न बिर्सन्छौ । जस्तै–बत्ति, रिमोट, कुर्सीको खुट्टाको भागहरू आदि । यसलाई पनि सफाई गर्न बिर्सिनु हुन्न । नत्र तपाईले गर्नु भएको अरु सफाई पनि ब्यर्थ हुन्छ । त्यसैले साना सामानहरूलाई पहिले सफा गर्नुपर्छ ।
किचनको सफाई गर्दा पहिले भुँइको सफाई गर्न हुन्न
किचनमा प्राय हामी पहिले भँुइको सफाई गर्छौ र पछि भाँडा माझ्छौ । यसो गर्दा पछि फेरि भुँइ फोहोर हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले, पहिले भाँडा तथा अन्य सफाई सकेर मात्र भुँइको सफाई गर्नुपर्छ । यसरी थोरै समय र कम मिहिनेतबाट घर सफा गर्न सकिन्छ ।